Kedu ihe bụ Mmetụta nke Ahịa Mgbasa Ọha? | Martech Zone
Gịnị bụ ahịa mgbasa ozi? Amaara m na nke ahụ dị ka ajụjụ elementrị, mana ọ dabara n'ezie mkparịta ụka. Enwere ọtụtụ akụkụ na nnukwu usoro mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta yana yana njikọ chiri anya ya na usoro ntanetị ndị ọzọ dịka ọdịnaya, ọchụchọ, email na mobile.
Ka anyị laghachi na nkọwa nke ahịa. Ahịa bụ omume ma ọ bụ azụmaahịa nke nyocha, atụmatụ, imezu, ịkwalite na ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Social media bụ usoro nkwukọrịta nke na-enyere ndị ọrụ aka ịmepụta ọdịnaya, kekọrịta ọdịnaya ma ọ bụ sonye na ịkparịta ụka n'socialntanet. Mgbasa mgbasa ozi dị ka onye na-ajụ ase dị nnọọ iche na mgbasa ozi ọdịnala maka ihe abụọ. Nke mbu, oru a bu otutu oha na eze nke ndi ahia nwere ike ichoputa. Nke abuo, onye na-ajụ ihe na-enye ohere maka nkwurịta okwu bi-directional - ma nke ọma ma nke na-enweghị isi.
Enwere ndị ọrụ mgbasa ozi mmadụ ijeri 3.78 n'ụwa niile na ọnụọgụ a ga-aga n'ihu na-eto eto n'ime afọ ole na ole sochirinụ. Dị ka ọ na-anọchi, na equates ihe 48 percent nke ọnụ ọgụgụ ụwa ugbu a.
Gịnị bụ Social Media Marketing?
Usoro mgbasa ozi mgbasa ozi siri ike ga-enwerịrị ma atụmatụ dị iche iche nke mgbasa ozi mgbasa ozi yana ịkwalite ụzọ nke a ga-esi nyochaa ma kwalite ụdị. Nke ahụ pụtara na ịnwe atụmatụ ịkwanye 2 tweets kwa ụbọchị abụghị atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze. Atụmatụ zuru oke na-etinye ngwaọrụ na usoro iji:
Market Research - Colnakọta ozi nke ọma ime nnyocha na ịghọta na ikwukọrịta okwu na ndị na-ege gị ntị.
Ntị na-ege ntị - Nlekota na imeghachi omume na arịrịọ ndị na-ege gị ntị, gụnyere ọrụ ndị ahịa ma ọ bụ arịrịọ ahịa.
Nchịkwa nchịkwa - Ichebe ma melite aha nke gị ma ọ bụ nke aha gị, tinyere nyochaa nyocha, nchịkọta na mbipụta.
Mbipụta Ọha na Ọha - ịhazi, ịhazi usoro, na ibipụta ọdịnaya nke na-enye mmata na uru ndị ahịa gị nwere, gụnyere otu esi eme ya, ịgba akaebe, iduzi echiche, nyocha ngwaahịa, akụkọ, yana ọbụlagodi ntụrụndụ.
Social ịkparịta ụka n'Ịntanet - na-arụsi ọrụ ike na atụmatụ ndị na-eme ka ị rute ndị na-emetụta ihe, atụmanya, ndị ahịa na ndị ọrụ.
Nkwalite mmekọrịta - Usoro nkwado nke na - eme ka nsonaazụ azụmaahịa, gụnyere mgbasa ozi, onyinye, na ịkwado. Nke a nwere ike ịgbatị na ịchọta ma na-ego ndị ọrụ ịgbatị mgbasa ozi gị na netwọkụ ha.
Nsonaazụ azụmaahịa agaghị abụrịrị ezigbo nzụta, mana ha nwere ike ịme ka ị mata, tụkwasị obi, yana ikike. N'ezie, mgbasa ozi mmekọrịta oge ụfọdụ abụghị ezigbo usoro iji kwalite ịzụrụ ihe ozugbo.
73% nke ndị ahịa kwenyere na mgbalị ha site na mgbasa ozi mgbasa ozi na-arụ ọrụ adịtụla irè ma ọ bụ na-arụ ọrụ nke ọma maka azụmahịa ha.
A na-ejikarị usoro mgbasa ozi eme ihe iji chọpụta site n'okwu ọnụ, isi iyi nke mkparịta ụka maka nyocha, na isi mmalite iji jikọọ - site na ndị mmadụ - na ụlọ ọrụ. N'ihi na obu uzo abuo, obu ihe di iche na uzo ahia ndi ozo.
71% nke ndị na-azụ ahịa nwere ezigbo ahụmịhe na akara na mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịkwado akara ahụ na ndị enyi na ezinụlọ ha.
View Martech Zone'S Social Media Statistics Infographic
Usoro mgbasa ozi Social Media na ihe Nlereanya
54% nke ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na-eji usoro mgbasa ozi eme ihe iji chọpụta ngwaahịa.
Market Research - Ana m arụ ọrụ na onye na-emepụta uwe ugbu a bụ onye na-ebupụta ngwa ahịa ndị ahịa ha na ntanetị. Anyị na-eji mmadụ na-ege ntị iji mata Keywords na nwaa ọkụ eletrik ahu nagide mgbe na-ekwu okwu banyere n'elu asọmpi nke mere na anyị nwere ike na-etinye na okwu n'ime anyị mbọn mgbalị.
Ntị na-ege ntị - M nwere alerts guzobere maka onwe m ika na saịtị a ka m wee hụ ihe m kwuru na ntanetị ma nwee ike ịzaghachi ha ozugbo. Ọ bụghị onye ọ bụla na-egosipụta akara na ọkwa, yabụ ige ntị dị mkpa.
Nchịkwa nchịkwa - M nwere abụọ obodo ụdị m na-arụ ọrụ na anyị na-melite akpaghị aka nyochaa arịrịọ maka ndị ahịa ha. Achịkọtara nyocha ọ bụla ma zaghachi ya, ndị ahịa nwere obi ụtọ na-akpali ịkekọrịta nyocha ha n'ịntanetị. Nke a emeela ka ọhụhụwanyewanye na nsonaazụ ọchụchọ mpaghara.
Mbipụta Ọha na Ọha - Mụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na - ejikwa kalenda ọdịnaya ma jikwaa usoro ihe omume ha Agorapulse (Abụ m onye nnọchi anya obodo). Nke a na-echekwa ha ọtụtụ oge n'ihi na ha ekwesịghị ịhazi ma jikwaa usoro ọ bụla. Anyị na-etinye nkpado UTM mkpado nke mere na anyị nwere ike ịhụ otú mgbasa ozi mmekọrịta na-akwọ ụgbọala na mgbanwe na saịtị ha.
Social ịkparịta ụka n'Ịntanet - Ana m eji ikpo okwu enyere m aka ịmata ma jikọọ na ndị na-eme ihe ike na ndị otu nwere ike ịnweta m na LinkedIn. O nweela mmetụta dị ukwuu na ohere ikwu okwu m ma nyere ụlọ ọrụ m aka ịbawanye ahịa ya.
Nkwalite mmekọrịta - Ọtụtụ ndị ahịa m na-etinye mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ mgbe ha na-akwalite ihe omume, webinars, ma ọ bụ ahịa. The iche ezubere iche ndị a ad nyiwe na-enye bụ incredibly bara uru.
Aghọtara m na ị nwere ike iwulite ụfọdụ mkpọsa mgbasa ozi mmekọrịta dị mgbagwoju anya nke na-etinye ojiji na ndị na-ajụ ase n'ụzọ nke na-adabaghị na nhọrọ m dị n'elu. M na-atụfu ụfọdụ ojiji ọ bụla nke onye ọ bụla na-ajụ ndị mmụọ iji nye ụfọdụ nghọta banyere otu esi eji ha iche.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-echekarị na ọ bụrụ na ọ bụ onye na-ajụkarị ase ma ọ bụ nke kachasị mma. Nke a bụ ihe ọghọm na-echere ime n'ihi na ha anaghị enye ma ọ bụ jikọtara ndị na-ajụ ase ihe ha nwere ike ime.
Etu otu ahia si eji Social Media
Gosipụta akara gị - okwu ọnụ bụ incredibly irè n'ihi na ọ bụ ukwuu mkpa. Ndị mmadụ n'otu ụlọ ọrụ akọwapụtara, dịka ọmụmaatụ, na-ezukọkarị na ntanetị mgbasa ozi na otu. Ọ bụrụ na otu onye kerịta akara gị, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ndị na-ege ntị nwere ike ịhụ ma kesaa ya.
Zụlite obodo na-eguzosi ike n'ihe - ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ mmekọrịta dị mma nke ịnye ndị na-ege gị ntị uru - ma ọ bụ site na enyemaka kwụ ọtọ, ọdịnaya echekwara, ma ọ bụ akụkọ ndị ọzọ, ndụmọdụ na aghụghọ, obodo gị ga-eto eto ma tụkwasị gị obi. Tụkwasị obi na ikike bụ ihe dị mkpa maka mkpebi ịzụta ọ bụla.
Melite ọrụ ndị ahịa - mgbe onye ahịa gị kpọrọ gị maka enyemaka, ọ bụ mkparịta ụka 1: 1. Mana mgbe onye ahịa rutere na mgbasa ozi mgbasa ozi, ndị na-ege gị ntị ga-ahụ otu ị si meghachi omume ma zaghachi mkpa ha. Enwere ike ikwugharị nnukwu ọrụ ndị ahịa n'akụkụ niile nke ụwa… yabụ ahịa ndị ahịa nwere ike bụrụ ọdachi.
Mee ka mgbasa ozi dijitalụ dịkwuo elu - gini kpatara ọdịnaya ngwaahịa na-enweghị usoro ịkekọrịta ma kwalite ya? Contentzụlite ọdịnaya apụtaghị Ọ bụrụ na i wuo ya, ha ga-abịa. Ha agaghị. Yabụ iwu nnukwu netwọkụ mmekọrịta ebe ndị obodo na-akwado ịkpa aka dị ike.
Mbuli okporo ụzọ na SEO - Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ọchụchọ ahụ na-aga n'ihu na-ewepu njikọ, ndị na-akwado ya na ndị na-eso ụzọ ya dị ka ihe na-akpata njikwa ogo engine, o doro anya na onye siri ike usoro mgbasa ozi mmekọrịta ga-eme ka nsonaazụ ọchụchọ engine dị ukwuu.
Expmụbawanye ahịa ma rute ndị na-ege ntị ọhụụ - a nwaputara na ndị na-ere ahịa ndị na-etinye usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze ndị na-adịghị. Ọzọkwa, ndị ahịa gị na-aghọta otu esi emeso nzaghachi na-adịghị mma na usoro ahịa n'ihi na ha na-agwa ndị mmadụ okwu kwa ụbọchị. Ngalaba ahịa gị anaghị adịkarị. Itinye ndị nnọchi anya ahịa gị na mmekọrịta mmadụ na ibe iji wuo ọnụnọ bụ ụzọ dị egwu iji gbasaa iru gị.
Bee ahia ego - mgbe ọ na-achọ ike, uto na-eto eto na mgbasa ozi mmekọrịta maka ihe ndị a, mbak, na ịpị aka ga-emecha belata ụgwọ ebe ịbawanye ụba. E nwere akụkọ dị ịtụnanya banyere ụlọ ọrụ na-agbasawanye ịgbasa mgbe ha wusịrị mgbasa ozi mgbasa ozi pụrụ iche. Nke ahụ chọrọ atụmatụ nwere ike imegide ọtụtụ ọdịnala ụlọ ọrụ. Enwekwara ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị dị egwu na mgbasa ozi mmekọrịta ma na-egbusi oge ha.
49% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha dabere na ndụmọdụ ndị na-emetụta ndị mmadụ na mgbasa ozi mmekọrịta iji gwa mkpebi ịzụta ha.
Nkwurịta okwu anọ
N'ime nke ọ bụla n'ime ihe ndị a bụ ụzọ iji nwekwuo nnweta na njide nke ndị ahịa gị yana iji mebie ha na njem ndị ahịa ha.
Mmetụta nke Social Media
Agbanyeghị na anaghị m amanye ndị ahịa m itinye ego na mmemme ọhaneze ọ bụla, ana m ahụ nloghachi na-aga n'ihu na itinye ego mgbe ndị ahịa m na-achịkwa aha ha ma na-ewulite uru na ndị na-eso ụzọ ha n'ịntanetị. N'ọnọdụ ọ bụla, ileghara ike nke mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ịbụ ihe egwu ma ọ bụrụ na ha emebie nsogbu ndị ahịa. Gị ahịa na-atụ anya na ị na-ugbu a na-azaghachi a n'oge n'ụzọ na isi na-elekọta mmadụ media nyiwe… incorporating na ngwá ọrụ na azum ime nke a dị oké mkpa.
Tags: FacebookFacebook MarketingLinkin ahịanchọpụta ahịaaha onlinePinterestahanjikwa ahaNyochana-elekọta mmadụ na-ege ntịmgbasa mgbasa ozi mgbasa oziebumnuche mgbasa oziSocial Media Marketingmgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa oziịkparịta ụka n'socialntanetnkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe yana-elekọta mmadụ ebipụtaTikTokahia ahia youtube
Infographic: 21 Social Media Statistics nke Onye Ahịa ọ bụla Kwesịrị Knowmara Na 2021
Top ihe maka Irè Mobile App Push ngosi njikọ aka
Enweghị m ike ikwenye ọzọ, ana m abụ onye nọ na nnọkọ na-anwa ịgbanye ọrụ vidio m nye ndị egwu! Ma ọbụlagodi na ha nwere mmasị, ha anọghị na ezi uche, ọ bụghị dịka mgbe ha nọ n'ịntanetị wee chọta saịtị m wee nọrọ oge ụfọdụ na-ele ọrụ m, ugbu a ndị ahịa kpọtụrụ m.
Banyere iji vidiyo iji mee onwe gị ka ị mara onwe gị, ọ ka mma ka ị rapara ide ederede maka okwu ederede ma ọ bụ na ị chere na ịkọwa okwu bụkwa ezigbo echiche?
Daalụ! Uru nke ịde blọgụ na vidiyo iji nye okwu ọchụchọ ga-abụ mmeri na akwụkwọ m. Ndi mmadu pere mpe na-eji nyocha vidio - n'ime ha, ọtụtụ anaghị ewepụta oge iji kọwaa vidiyo ahụ nke ọma.
Na ijikọta ha abụọ dị ike mana ọ na - ewe ogologo oge karịa. Inwe ike ibipụta vidiyo Blog (Podcastable), NA blog banyere vidiyo ọ bụla ga - eme ka ohere ịchọrọ ịchọta gị dị mma!
Obi ụtọ na New Year!
Nnukwu post Doug. Ahụla m ka ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọrụ ha na-arụ ọrụ na-eji netwọk mmekọrịta. Ọ bụghị naanị na ọ dị ka spam, mana ọ na-esi ísì nke spam dị ọnụ ala. Approachzọ kachasị mma bụ iwepụta oge iji wuo ọdịnaya dị n'ịntanetị (blog bụ nhọrọ dị ukwuu), mepụta nka, gosipụta ọkaibe na ọrụ gị, ma merie nsonaazụ ọchụchọ.
Doug nke a bụ nnukwu post. Dịka ụlọ ọrụ weebụ dịgasị iche iche, anyị na-anwa mgbe niile ịchọta ụzọ ọhụrụ iji usoro mgbasa ozi na-eme ka ọnọdụ anyị na ahịa na-aga nke ọma. Echere m na ị kụrụ ụfọdụ isi ihe siri ike banyere ojiji nke mgbasa ozi mmekọrịta, ihe m chere na ọbụna ndị ọkachamara kwesịrị iburu n'uche.